Netflix လို မြိုး နာမညျကွီးတဲ့ Amazon Prime ကရိုကျမယျ့ နိုငျငံတကာ ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲ တဈခုမှာ ပါဝငျ ရိုကျကူးခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့လညျး နိုငျငံရေး အခွအေနကွေောငျ့ လကျလှတျခဲ့ရတဲ့ မငျးသား Russell – Shwe Likes
အိမျမကျ ဆုံရာ Season(1)မှ စလို့ ကွညျလငျ ခြိုမွတဲ့ အသံနှငျ့ ခြိုမွတဲ့ အပွုံးကွောငျ့ ပရိတျသတျ ရငျထဲနရော ယူထားခဲ့သူ ကတော့ တေးသံရှငျ Russell ပဲဖွဈပါတယျ။ သူဟာ တေးသီခငျြး မြားသီ ဆိုရုံသာမက အခွားသော အနုပညာလု ပျငနျးမြားဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျ ၊ မျောဒယျ နှငျ့ ရုပျသံ အစီအစ ဉျတငျဆကျသူ အဖွဈလညျး လုပျကို ငျလကျြရှိပါတယျ။
မငျးသား Russell ပါဝငျသရု ပျဆော ငျခဲ့တဲ့ “ည”ရုပျရှငျဇာတျကား ကွီးဟာဆို ရငျလညျး လူကွီးလူငယျ ပရိတျသတျမရှေး ကသဘော ကနြှဈသကျကာ အားပေး ခဲ့ရတဲ့အထိေ အာငျမွငျမှုရရှိခဲ့ တာဖွဈပါ တယျ။ ဒါ့အပွငျ မငျးသား Russell ကိုလညျး ခဈြခငျအားေ ပးတဲ့ပရိတျ သတျမြား ပိုမိုမြားပွား လာခဲ့ပါတယျ။
လကျရှိမှာလ ညျးသူဟာ နိုငျငံတကာရုပျ သံဇာတျလ မျးတှဲမှာ မွနျမာလူမြိုးဇာတျ ရုပျတဈခုအ တှကျ သရုပျဆောငျဖို့ ရှေးခယျြခံ ခဲ့ရပမေယျ့ လကျရှိနိုငျငံေ ရးအွေ ခအနအေ ရ ဗီဇာ အခကျအခဲကွောငျ့ ထိုအခှငျ့အေ ရးအကွီးကိုလကျ လှတျလို ကျရကွောငျးရငျန ငျ့ဖှယျဆိုလာ ခဲ့ပါတယျ။
သူဖျောပွထား တာကတော့ ” Netflix လိုမြိုး နာမညျကွီးတဲ့ Amazon Prime ကရိုကျ မယျ့ အကွီးစား International Series တဈခုအ တှကျ Zoom ကနေ Audition ဝငျခဲ့တယျ …. စိုးဝငျး ဆိုတဲ့ ဗမာ ကာရိုကျတာပဲ …. Hollywood A list Celebrities တှလေ ညျးပါမညျ …. Location ကတော့ Europe နိုငျငံတှမှော သှားရိုကျမှာ ဖွဈတယျပေါ့နျော ….
ကာရိုကျတာ အရလညျး ကိုယျနဲ့ ကှကျတိဖွဈနတေယျ …. Casting agents တှလေညျးသဘောကကြွတယျ …. အခွအေနလေညျး ကောငျးခဲ့တယျ အဆငျ့ဆငျ့တှေ အောငျလာပွီးမှ နောငျဆုံး မွနျမာနိုငျငံကဖွဈနလေို့ ကိုယျ့ရဲ့ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးကွောငျ့ မဟုတျပဲ
Visa အခကျအခဲကွောငျ့ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြ တဈခုနဲ့ တဈကမ်ဘာလုံးက ကိုယျ့ကို သိမယျ့ International Film Exposure ကွီး တဈခုလုံး လကျလှတျခဲ့ရတယျ ….အျော …. ငါတို့ ကံရယျ …”လို့ဖျောပွခဲ့တာဖွဈပွီး ပရိတျသတျတှအေနနေဲ့လညျး အလှနျစိတျမကော ငျးဖွဈနခေဲ့ကွပါတယျ။
အိမ်မက် ဆုံရာ Season(1)မှ စလို့ ကြည်လင် ချိုမြတဲ့ အသံနှင့် ချိုမြတဲ့ အပြုံးကြောင့် ပရိတ်သတ် ရင်ထဲနေရာ ယူထားခဲ့သူ ကတော့ တေးသံရှင် Russell ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ တေးသီချင်း များသီ ဆိုရုံသာမက အခြားသော အနုပညာလု ပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ၊ မော်ဒယ် နှင့် ရုပ်သံ အစီအစ ဉ်တင်ဆက်သူ အဖြစ်လည်း လုပ်ကို င်လျက်ရှိပါတယ်။
မင်းသား Russell ပါဝင်သရု ပ်ဆော င်ခဲ့တဲ့ “ည”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကြီးဟာဆို ရင်လည်း လူကြီးလူငယ် ပရိတ်သတ်မရွေး ကသဘော ကျနှစ်သက်ကာ အားပေး ခဲ့ရတဲ့အထိေ အာင်မြင်မှုရရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် မင်းသား Russell ကိုလည်း ချစ်ခင်အားေ ပးတဲ့ပရိတ် သတ်များ ပိုမိုများပြား လာခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိမှာလ ည်းသူဟာ နိုင်ငံတကာရုပ် သံဇာတ်လ မ်းတွဲမှာ မြန်မာလူမျိုးဇာတ် ရုပ်တစ်ခုအ တွက် သရုပ်ဆောင်ဖို့ ရွေးချယ်ခံ ခဲ့ရပေမယ့် လက်ရှိနိုင်ငံေ ရးအြေ ခအနေအ ရ ဗီဇာ အခက်အခဲကြောင့် ထိုအခွင့်အေ ရးအကြီးကိုလက် လွှတ်လို က်ရကြောင်းရင်န င့်ဖွယ်ဆိုလာ ခဲ့ပါတယ်။
သူဖော်ပြထား တာကတော့ ” Netflix လိုမျိုး နာမည်ကြီးတဲ့ Amazon Prime ကရိုက် မယ့် အကြီးစား International Series တစ်ခုအ တွက် Zoom ကနေ Audition ဝင်ခဲ့တယ် …. စိုးဝင်း ဆိုတဲ့ ဗမာ ကာရိုက်တာပဲ …. Hollywood A list Celebrities တွေလ ည်းပါမည် …. Location ကတော့ Europe နိုင်ငံတွေမှာ သွားရိုက်မှာ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ….
ကာရိုက်တာ အရလည်း ကိုယ်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်နေတယ် …. Casting agents တွေလည်းသဘောကျကြတယ် …. အခြေအနေလည်း ကောင်းခဲ့တယ် အဆင့်ဆင့်တွေ အောင်လာပြီးမှ နောင်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်နေလို့ ကိုယ့်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကြောင့် မဟုတ်ပဲ
Visa အခက်အခဲကြောင့်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကိုယ့်ကို သိမယ့် International Film Exposure ကြီး တစ်ခုလုံး လက်လွှတ်ခဲ့ရတယ် ….အော် …. ငါတို့ ကံရယ် …”လို့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့လည်း အလွန်စိတ်မကော င်းဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။
နှငျးဆီအဖှဲ့သားတှေ(တဈပှငျ့လြော့)နဲ့ အနုပညာရှငျတှေ မြားစှာ တကျရောကျခဲ့ကွတဲ့ နတေိုးရဲ့ မင်ျဂလာဧညျ့ခံပှဲ